आगामी सेप्टेम्बर महिनामा संसारकै राजधानी मानिने अमेरिकाको राजधानी न्युर्योकमा नेपाल प्रर्दशनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना हुदैछ । वल्र्ड बिजनेश म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्सल्ट्याण्टले आयोजना गरेको उक्त मेलामा नेपालमा उत्पादित बस्तुहरु प्रर्दशनीमा राखिनेछ । नेपाली उत्पादनको अमेरिका हुदै विश्व बजारमा विस्तार गर्न भन्दै आयोजना गरिएको उक्त मेलामा नेपाल सहित विश्वभरका व्यवसायी र उत्पादहरुको सहभागिता रहने छ । उक्त मेलाबारे कन्सल्ट्याण्टका नेपाल प्रोजेक्ट डाईरेक्टर डम्बर शाहुसँग गन्तव्यनेपाल न्यूजडट कमले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
यो कस्तो मेला हो ?
नेपाली उत्पादनबारे अमेरिका हुदै विश्वभर विस्तार गर्न सघाउ पु¥याउन पहिलो पटक मेलाको आयोजना गरिएको हो । जसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढि नेपाली उद्योगी व्यवसायी र बाँकी अन्यमुलुकका व्यवसायी र उत्पादकले सहभागिता जनाउने छन् । मेलामा नेपाली कृषि उत्पादन, जडिबुटी, थांका पेन्टिङ, पस्मिना,कफि,पर्यटन लगायतका सामाग्रीको तीन सय २३ वटा स्टल रहनेछ । मेला आयोजनाका लागि मात्रै १० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान हामीले गरेका छौ ।
मेलामा कस्ता–कस्ता व्यवसायीले सहभागिता जनाउन सक्ने छन् ?
पहिलो त नेपाल सरकारको भ्याट, प्यानमा दर्ता भएको कम्पनी हुनुपर्ने छ । भने अर्को राज्यलाई ट्याक्स तिरेर,नविकरण भएका र पाँच जना सम्मलाई रोजगारी प्रदान गरेका कम्पनी जसले यो मेलामा सहभागिता जनाउन चाहन्छन् उनीहरुलाई मेलामा सहभागिताका लागि पठाउछौ । जसका लागि प्याकेज नलिनेहरुका लागि पाँच सय डलर शूल्क लाग्ने छन् भने प्याकेज लिनेको हकमा चाहि सात हजार पाँचसय डलर शूल्क लाग्ने छ । प्याकेज लिनेलाई दुईतर्फि हवाई टिकट र लजिङफुटिङको व्यवस्था हामी आफैले गर्ने छौ ।
मैले अघिनै भने नेपाली उत्पादनको अमेरिका हुदै विश्व बजारमा विस्तार गर्ने नै मेलाको मुलभूत उद्धेश्य हो । त्यसका साथसाथै केही समय अघिमात्र अमेरिकाले नेपाली तयारी पोशाक लगायतका सामाग्रीमा भन्सार छुट सुविधा उपलब्ध गराउने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपाललाई विशेष व्यापार ग्राह्यता दिन स्विकृती प्रदान गर्ने कानुनी हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । त्यसकारण यही मौका छोपी नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले मेलाको आयोजना गरेका हौ ।
यसले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कस्तो भूमिका खेल्छ ?
मेलाको अर्को उद्धेश्य भनेको नेपालको पयृटन प्रवद्र्धन गर्ने पनि हो । त्यसकारण ३० भन्दा बढि पर्यटकीय कम्पनीलाई यो मेलामा सहभागिता गराउदै छौ । भने उनीलाई अमेरिकी टूरअपरेटर्ससँग विटुवि समेत गराउने छौ । भूकम्प र नाकाबन्दी पछि थलिएको नेपाली पर्यटनलाई उकास्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक प्रचारका लागि मेला फलदायी हुने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
तपाईहरुको अन्य योजना के छन् ?
विगतमा पनि हामीले अमेरिकामा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामान्य विजनेश मिटिङहरुगर्दै आएका थियो । यसपटक चाहि यो मेलाको आयोजना गरेका हौ । यसको समापन लगतै हामी यूरोपमा पनि यस्तै मेला आयोजना गर्ने सोचमा छौ । सरकारले अभिभावको भुमिका निर्वाह गरेर हामीलार्य काुननी सहजता प्रदान गरिदिए आगामी दिनमा अन्त्र समेत यस्तै कार्यक्रम गर्न थप हौसला मिल्ने थियो ।